तर्साउँदैमा सत्याग्रह रोकिँदैन : डा. केसी – HostKhabar ::
अन्नपुर्ण पोष्ट/दैलेख : चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले आफ्नो सत्याग्रहलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। हाल जुम्लामा रहेका डा. केसीले स्थानीय तह र प्रशासनले अवरोध र घेराबन्दीको प्रयास गरे पनि सत्याग्रह नरोकिने बताए। अबको सत्याग्रह निर्णायक हुने उनको भनाइ छ।
जुम्लामा प्रहरीको घेरामा रहेका डा. गोविन्द केसी
यही मागसहित उनले दुई वर्षअघि जुम्लामै सत्याग्रह थालेका थिए। तर त्यति बेला डा। केसीलाई सरकारले जबर्जस्ती हेलिकप्टरमा काठमाडौं पुर्‍याएको थियो। त्यस बेला प्रहरी र उनका समर्थकबीच झडप हुँदा शिक्षण अस्पतालमा भौतिक क्षतिसमेत भएको भयो। त्यस बेला सरकारले गरेको सम्झौता र सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि यसपटक पुनः
डा. केसीले जुम्लामा अनशन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। यही कारण पनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले उनीमाथि निगरानी बढाउँदै अवरोध गर्दै आएका हुन्। डा। केसीले यसअघि गत साउन ११ गते जुम्ला पुगेर आफ्ना माग पूरा गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएका थिए।